समुन्नत चितवनको बिकासका लागि मेरो उम्मेदवारी : श्रेष्ठ (पुरा जीवनीसहित) – Saurahaonline.com
समुन्नत चितवनको बिकासका लागि मेरो उम्मेदवारी : श्रेष्ठ (पुरा जीवनीसहित)
सौराहा अनलाइन | २०७४, ७ मंसिर बिहीबार
पछिल्लो समय निर्वाचनको माहोलले जिल्लामा निकै रौनक छाएको छ । संबिधान जारी भईसकेपछि हुन लागेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यतिखेर राष्टिूय राजनिति ध्रुबिकरण भएको छ । राजनैतिकमा आएको उतार चढाबका कारण देशको राजनैतिक परिदृष्यमा नै परिबर्तन भएको छ । अहिले मुख्यतः निर्वाचनका लागि दुई शक्ति प्रतिश्पर्धामा रहेकाछन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा नेपाली काँग्रेस लगाएतका राजनैतिक दल एक ठाउँमा आएका छन् भने बाम गठबन्धनका नाममा नेकपा एमाले र माओवादी अर्को ठाउँमा उभिएका छन् ।
जसले गर्दा अहिलेको निर्वाचनमा लोकतन्त्रबादी शक्ति र बाम शक्तिको बिचमा कडा प्रतिशपर्धा हुने देखिएको छ । यो समयमा नेपाली काँग्रेसको राजनितिमा सकृय रहनु भएका र हाल नेपाली काँग्रेस चितवनको सभापति समेत हुनु भएका जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारको रुपमा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हुमिदै हुनुहुन्छ । बि. सं. २०३६ साल असार ९ गते चितवनको साबिक शक्तिखोर गाउ विकास समिति वडा नम्बर ६ हाल कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा बुबा स्व. बलबहादुर श्रेष्ठ र माता तिलकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट साईलो छोराको रुपमा जन्मनु भएका जितनारायण श्रेष्ठका चार दाजुभाई र एक दिदि रहनु भएको छ । उहाँको बाल्यकाल शक्तिखोरमानै बितेको थियो ।
अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एम. ए.) गर्नु भएका श्रेष्ठले कक्षा ९ सम्म चतुर्मुखी मा. बि. शक्तिखोर, एस.एल.सि. नेपाल उच्च माबि रत्ननगर, बिरेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस भरतपुरबाट आई ए सि, त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक र बिरेन्द्र बहुमुखि क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ । युवा, प्रखर बक्ताका रुपमा चिनिनु भएका श्रेष्ठ सानो उमेरमानै राजनितिमा ठूलो फड्को मार्न सफल हुनु भएको छ । मंसिर २१ गते हुन गहिरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर दुई (क) बाट प्रदेश सभाको लागि काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएका श्रेष्ठ आफु निर्वाचित भए यस क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धि संगै पहाडि क्षेत्रमा बिकासको मुल फुटाउने बताउनु हुन्छ । बाल्यकाल देखिनै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएका श्रेष्ठ २१ बर्षको उमेरमानै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा शक्तिखोरको संस्थापक सभापति हुदै जिल्ला शाखाको कार्यसमितिमा रहि काम समेत गरिसक्नु भएको छ ।
२०४८ सालबाट राजनिति यात्रा सुरु गर्नु भएका श्रेष्ठ नेबिसंघ बिद्यालय समितिको सचिब हुदै दुई कार्यकाल नेबिसंघ जिल्ला सचिब, दुई कार्यकाल नेबिसंघ जिल्ला सभापति हुँदै २०६६ सालबाट नेपाली काँग्रेसको पाटिगत राजनिती यात्रा सुरु भएको थियो । एक कार्यकाल नेपाली काँग्रेस चितवनको कार्यसमिति सदस्य, २०६९ सालमा चितवनको सचिब हुदै २०७२ सालमा चितवनको पार्टी सभापति हुनु भयो ।
आदर्श र मुल्य मान्यतालाई प्रथामिकतामा राख्ने श्रेष्ठ आफुनो राजनिती यात्राको श्रेय स्वर्गिय हजुरबुबा हर्कबहादुर श्रेष्ठलाई दिनु हुन्छ । शक्तिखोरको नामाकरण समेत हजुरबुबाले गरेको बताउने श्रेष्ठ आफ्नो बिजयले पहाडि क्षेत्रको मुहार फेरीने बताउनु हुन्छ । आफुलाई पार्टीले मुख्यमन्त्री मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए पुरा गर्न सक्ने दाबि गर्दै आएका श्रेष्ठ छोटो समयमा लोकप्रिय बन्न सफल हुनु भएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सभा अन्र्तगत चितवन क्षेत्र नम्बर २ (क) का उम्मेदवार श्रेष्ठ संग आफ्नो क्षेत्रको बिकासका लागि के गर्नु हुन्छ भन्ने विषयमा रहि गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ :
म चितवनको पहाडि क्षेत्रको बासिन्दा हुँ । जसका कारण मलाई पहाडमा कसरी बिकास गरेर जिल्लाको सदरमुकाम सम्म जोड्नु पर्छ भन्ने जानकारी छ । मैले यस क्षेत्रको बिकास संगै जिल्लाको सदरमुकाम संग जोड्न सहज बनाउनु मेरो मुख्य जिम्मेवारी हुने छ । पहाडी क्षेत्रको बिकास संगै संम्ृदि बनाउनु छ र यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक जीबन स्तर उच्च बनाउनु छ । यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबर्धन गर्दै यहाँको जनताको स्तर उन्नति गर्नु छ । जसले गर्दा उनिहरुको जिवन शैलीमा परिबर्तन आउने छ ।
यस क्षेत्रमा अहिले पनि एक छाक टार्न गारो हुने घर परिवार छ । पहाडि क्षेत्रमा त्यो बर्गलाई माथि उठाउनु छ । अनि भरतपुरको नारायणगढ बजार पनि मेरो क्षेत्रमा पर्दछ । यसलाई व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउनु मेरो मुख्य कार्य हुने छ । पार्टिको नेतृत्वमा रहदाँ आफुले जानकारी पाएका हरेक समस्या संग जुद्दै आफ्नो क्षेत्रलाई आर्थिक रुपबाट सम्बृद्ध बनाउँदै सुव्यवस्थित बिकास निर्माण मेरो मुख्य दायित्व रहने छ ।
तपाईको निर्वाचित भए पश्चातका योजना के के छन् ?
साबिकको जुटपानी, शक्तिखोर, पदमपुर, जुन अहिले कालिका न.पा. अन्तर्गत पर्दछ । त्यसैगरि ईच्छाकामना गाउँपालीका शिद्धि, काउले, चण्डीभञ्याङ, दाहाखानी र दारेचोक पर्दछ । यसका साथै भरतपुर वडा नम्बर १,३ र २९ पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ। बिशेषत त्यहाँ मेरो परिवार, मेरो बुबा राजनितिक यात्रामा लाग्दा हिजोको शक्तिखोरलाई आजको शक्तिखोर बनाउन मेरो बुबाको योगदान महत्वपूर्ण छ । त्यतिमात्र होईन पहाडी संरचना र नगरपालिकाको सन्दर्भमा म कुनै अपरिचित अनुहार पनि होईन। त्यहाको हरेक सदस्यहरुको अफ्ठ्याराहरु, स्थानिय दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुको पिडा संग म जानकार छु । त्यहाको चेपाङका समस्या, गुरुङका समस्या, त्यहाका एक वर्षनै खान नपुग्ने परिवारको समस्या पनि मलाई थाहा छ ।
त्यतिमात्र नभएर चितवनको समृद्ध मानिने नारायणगढ बजार पनि मेरै प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै चितवनकै अति बिकट मानिने शिद्धि दारेचोक, चण्डिभञ्याङ, दाहाखानी, काउलेको पिडा पनि मलाई थाहा छ । बजारलाई ब्यबस्थित गर्नुपर्ने, सहरको स्तरउन्नति गर्नु पर्ने, यहाका समस्याहरुको समधान गर्नुपर्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ । ती सबै समस्यासँग जानाकार हुनुको नाताले यहाको बिकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। मैले आफ्नो राजनितिक जीवनमा आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म बिगत देखिनै काम गर्दै आएको छु ।
मैले चितवनको समृद्धी र उन्नतीको अभियानमा मेरो यो २२ वर्षे राजनितिक यात्रामा धेरै प्रयास र दुःख गरेको छु। त्यो कुरा यो सबै मेरो प्रदेश अन्तर्गत सम्पूर्ण दाजुभाई, दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाका समस्याहरु नजिकबाट पहिचान गरेको नाताले त्यहाका समस्याहरुलाई म भोलिका दिनहरुमा समधान गर्ने अठोट बोकेको छु। जिल्लाको समग्र बिकासको खाका तयार पर्ने अबस्था बाट अहिले मलाई पािर्टले एउटा प्रदेश सभाका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दै पहाडि क्षेत्रमा बिकासको मुल फुटाउनु र नारायणगढ बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु मेरो जिम्मेवारी हो । पहिला पार्टि सभापति हुदाँ जति गरे त्यो अझै जिम्मेवारी वढ्दै गएको महशुस गरेको छु । जिल्लालाई बित्तिय राजधानिको रुपमा बिकास गर्न कुनै कसुर काँग्रेसका उम्मेदवारहरुले बाँकी राख्ने छैनन् । काँग्रेसले जारी गरेको संबिधान कार्यान्वयन गर्दै समुन्नत जिल्लाको रुपमा बिकास गर्ने मेरो र काँग्रेसको योजना छ ।
यस्तै अठोट त बाम गठबन्धनले पनि गर्या होलान् नि ?
अठोट भन्दा पनि जिम्वेवारी पाउँदा पुरा गर्यो कि गरेन त्यो कुरा महत्वपुर्ण हो। म नेपाली काँग्रेस चितवनको पार्टी सभापती भएको छु। म सांसद पनि भएको छैन। मात्र पार्टीको सभापतीको हैसियतले जे जति आफ्नो क्षमता र योग्यताले त्यहाको उन्नती र समृद्धीको लागि पहल गरेको छु । तर त्यो काम बाम गठबन्धनका साथीहरुले गर्नु भयो कि भएन? त्यहाका समस्याको संम्बोधनमा लाग्नु भयो कि भएन ? हिजो महाभूकम्प गयो, महाभूकम्पको भोलिपल्ट म काउले पुगेको थिएँ।त्यहाका चेपाङका कुरा बुझेको थिएँ, गुरुङको कुरा बुझेको थिएँ, त्यहाका आदिबासी, जनजाती, र पिडित दाजुबैनीहरु जो भुकम्पबाट पिडित भए तिनीहरुलाई राहत लिएर पुगेको थिएँ। त्यहाका हरेक अफ्ठ्यारो सँग म जोडिएको छु। त्यसै कारणले कसले के भन्छन् भन्ने कुरा त्यहाका जनसमुदायले बुझेका छन्। सबै दाजुभाई, दिदीबहिनीसँग समन्वय भएको कारणले मैले बोल्ने भन्दा काम गर्ने हो त्यो भोलिका दिनमा पनि देखिन्छ।
यसभन्दा अघि संबिधानसभा निर्वाचनमा ने.क.पा. एमालेले जितेको क्षेत्र हो त्यो । के यहाँलाई बिजयी हुन सजिलो छ ?
जितेको क्षेत्र भनेर त्यसरी परिभाषित गर्नु उचित हुदैन । किनकि यो क्षेत्रको आधा आधि क्षेत्रफलमा त नेपाली काग्रेसले पनि जितेको हो । स्थानिय तह निर्वाचनमा इच्छाकामना गाउँपालिका काग्रेसलेनै जितेको हो। हामी कालिका न.पा. मा थोरै मात्र मत अन्तरले पराजित भएका हौँ। भरतपुरको २९ नं वडामा झिनो मतले पछाडी रह्यौँ। १ र ३ जितेकै अवस्था छ। हामी संगठानिक रुपमा कमजोर छदै छैनौँ। जुन साथीहरुको भावना र एकता देखीएको छ । त्यति मात्रैहोईन अहिलेको निर्वाचनमा काग्रेस भित्र बलियो एकता देखिएको छ । त्यो नै हाम्रो जित्ने पहिलो आधार हो । फेरि जनताले स्थानिय चुनाबमा भोट हालेका ब्यक्तिलाई ने अहिले पनि भोट हाल्छन् भन्ने छैन। जनताको मन कसले जित्न सक्छ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसंग बुझेकाले मेरो प्रतिस्पर्धानै देख्दिन ।
यो मेरो कुने घमण्ड पनि होईन।मेरो लागि मैदान खालि छ । यहि माटोमा सम्बन्ध जोडेको, त्यहि माटो मर्माहित हुदाँ मल्हम पट्टि लगाएको कारणले गर्दा यहाको समुदायसँग जुन निकटता र सम्बन्ध छ त्यो नै मेरो निर्वाचन जित्ने आधार हो। अर्को, हाम्रो पार्टीले जुन सङ्कल्प लिएको छ कि आज वाम गठबन्धनको नाउमा फेरी मुलुकलाई भयवह पार्ने, सम्यबादि सोचतिर लाग्ने परिकल्पना जुन राजनितिक पार्टीले गरेका छन् त्यो कुरा जनताले बुझी सकेका छन्।जनता अव कुनै पनि तानाशाह र अधिनायकबाद स्विकार्ने पक्षमा छैनन्।
जनता बरु भोके बस्न तयार छन् तर नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन चाहन्नन्। त्यसैले यो देशको प्रगती काग्रेसलेनै गर्ने हो। कमि कमजोरि भए त्यसलाई सुधारेर गर्ने पार्टी काग्रेस हो भन्ने जनताले बुझेका छन् भने त्यहि पार्टीको उमेद्वार त्यसमा पनि यहि माटोमा खेलेको र हुर्केको हुनुको नाताले जितनारायण श्रेष्ठलाई मत हाल्न अनकनाउँछन् भनेर मान्नु हुदैन। मेरो उमेद्वारीको कारण सम्पुर्ण दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु पार्टी भन्दा माथी उठेर, राम्रो उमेद्वार उठायो काँग्रेसले भनेर गर्व गरेर हिडेको अवस्था छ। त्यहि आधार नै मेरो निर्वाचन जित्ने बलियो आधार हो।
सबैभन्दा कान्छो उमेद्वार पनि हुनुहुन्छ त्यसैकारण ले पनि तपाईँमा बढी उत्साहा थपिनु र केहि महत्वकांक्षा बढेको हो ?
पहिलो कुरा त म उमेरले कान्छो हुँला ! तर जुन अवसर पाएँ यो स्वाभाविक रुपमा नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको मात्र होईन यो देशभरिकै नेपाली काङ्ग्रेसको कान्छो पार्टी सभापती हुनुको नाताले पनि उत्साह हुनु अन्यथा होईन।
तर म अहिले काङ्ग्रेस चितवनको पार्टी सभापती हुनुको नाताले उमेरसँग कुराहरु जोडिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन। म एउटा जिम्मेवार पार्टीको यो मुलुकको सबै भन्दा पुरानो, लोकतान्त्रिक र ठूलो पार्टिको जिल्ला सभापति हुनुको नाताले जुन मेरो प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी छ । युवा हुनुको नाताले युवाहरुले म संग अपेक्षा गर्ने, एउटा निकटता राख्ने कुरा स्वभाबिक छ । म ठूल्लो महत्वकांक्षा राखेर देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु , मन्त्री हुन्छु भनेर राजनितिमा लागेको होईन । म एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको परिवारमा हुकिएको नाताले काँग्रेस भए ।
जुन दिनमा काँग्रेस बुझे सहि पार्टीमा लागेको रहेछु राम्रो पार्टीमा लागेको रहेछु भन्ने आत्मबोध भयो । यो मुलुकमा प्रजातन्त्र रहनु पर्छ र लोकतन्त्र स्थापित र सुदृढ हुनु पर्छ । हरेक जनताले आँफुले चाहेको सासन व्यवस्था,पेशा, आफुले चाहेको धर्म संस्कृतिमा रम्न पाउनु पर्छ भन्ने सोच राखेर हिडेको युवा नागरिक हुनुका कारण स्वभाबिक रुपमा हरेक नागरिकले पाउने अबसरमा कुनै अबसर आउँदा त्यो अबसर बाट म पछाडी हट्नु पर्छ भन्ने कुरा होईन । जुन एउटा नागरिकले नैसर्गिक अधिकार प्राप्त गर्छ त्यहि अधिकार अन्तर्गत आज मलाई पार्टीले विश्वास गरेको हो ।
यो क्षेत्रका जनताले आशा र बिश्वास दुबै गरेका छन् । जितनारायण श्रेष्ठ काँग्रेसको उम्मेदवार हुदै गर्दा यो प्रदेश, र प्रतिनिधि सभामा समग्र जिल्लामा काँग्रेसले निर्वाचन जित्न सक्ने बलियो आधार वन्न सक्छ भनेर मलाई विश्वास गरिएको होला । त्यहि आधारमा म काँग्रेसको उम्मेदवार भएको छु । काँग्रेसको उम्मेदवार हुदै गर्दा निर्वाचन जित्छु भन्ने आत्मविश्वास म भित्र रहेको छ । त्यो मेरो आत्मबिश्वास भनेको यहि क्षेत्रका तमाम दिदि बहिनि, दाजुभाईको आत्मिएता, साथ र सहयोग हो । त्यसैले निर्वाचन जित्छु भन्ने कुरा लाई मैले महत्वकांक्षि ठान्दिन ।
मलाई पार्टीले जे अबसर दिन्छ त्यसमा हिड्ने मान्छे हो म । पार्टीको निति नियम भित्र रहेर पार्टीको दायरा भित्र बिधि बिधानलाई सिरोपर गरेर काम गर्ने पार्टीको एउटा कृयाशिल कर्मठ कार्यकर्ता भएको नाताले पार्टीले दिएको अबसरबाट पछि हट्ने कुरा छैन । म अहिले काँग्रेस चितवनको सभापति हुँ । भोलि मलाई प्रदेशबाट निर्वाचित हुदै गर्दा दिने मुख्य मन्त्री, मन्त्री वा कुनै पनि अबसरबाट म पछि हट्ने कुरा होईन । त्यो मेरो महत्वकांक्षा होईन । यो मेरो संगसंगै यो प्रदेशको समग्र चितवन बासिको अबसर पनि हुन सक्छ । त्यसलाई महत्वकांक्षाका रुपमा लिईदिनु भएन भन्ने मेरो आग्रह हो ।
राजनितिमा अफ्ठ्याराहरु पनि आए होलान त्यस्तो कुनै दिन छ ?
अफ्ठ्याराका खुड्किलाहरु पार गर्दै यहाँ सम्म आईपुगेको छु । स्वभाबिक रुपमा म शक्तिखोरमा जन्मेको मान्छे हो । म यहि तपाईले भने जस्तै उमेर समुहको हिसाबले पनि चितवन काँग्रेसको सभापति हुदै गर्दा निकै कठिनका दिनहरु झेले आईयो । हिजो शशस्त्र द्धन्द्धका समयमा कति अफ्ठ्याराहरु थिए । घर वाट बजार आउँदा र जाँदा माओवादी र सेनाको घेरामा परिन्थ्यो । हिजोका कठिन परिस्थितिहरु जुन बेला मुलुकमा शशस्त्र द्धन्द्ध, माओवादी हिंसात्मक गतिबिधिहरु चलि राखेको थियो । मुख पत्रमा समेत नाम राखिएको थियो ।
त्यस्तो समयबाट राजनितिक यात्रा सुरु गरियो । त्यहि राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने कुरा पनि निकै अफ्ठ्यारा थिए । तर ती सबै अफ्ठ्याराहरुलाई बिर्सिएर, कुल्चिएर ती संघर्षहरु र बाधाहरुलाई चिर्दै यो अबस्थामा आई पुगेको छु । राजनितिमा अप्ठ्यारा दिनहरु धेरै आए । राजनैतिक परिवारबाटै हुर्केकौ कारणले नेपाली काँग्रेस भएका कारण हामि जुन राजनितिक यात्रामा थियौ मेरो बुबा, म स्वयम पार्टीको बिभिन्न पद र बिद्यार्थीको पदमा रहँदै गर्दा हामिलाई कयैं पटक तत्कालीन माओवादीहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरुमा लैजान खोज्ने, आफ्ना कुराहरु राख्ने तर हामि कहिल्यौ पनि बिचल्लित नभई आफ्नो पार्टीको दृष्टिूकोण राख्न र व्यक्तिगत बिचार राख्न कहिल्यौ चुकेनै । त्यहि कठिनाइहरु पार गरेका कारण आज यहाँ सम्म आइपुगेको छु भन्ने लाग्छ ।
अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
अहिले मुलुक संघिन घडिमा उभिएको छ । यो मुलुकले संबिधान सभाबाट प्राप्त गरेको संबिधानमाथिनै धावा बोलीएको छ । जबरजस्त बामपन्थि एकताको नाममा कम्यूनिष्ट साम्यबादको अभ्यास गरिएको छ । यस घडिमा व्याक्तिले भन्दा पनि देशले हार्ने कि जित्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले आफ्नो अभिमत द्धारा लोकतन्त्रको पक्षपाती नेपाली काँग्रेस र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरि विजयी गराइदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु । हामि तपाईहरुको सेवामा सर्मपित छौ , हामिलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुनै हुनेछ । धन्यबाद, जय नेपाल ।
काठमाडौँ : दम फोक्सोको एकखाले जीर्ण रोग हो । यसमा श्वासनलीको मांसपेशीमा संकुचन (खुम्च्याई) आई सास फेर्न गाह्रो.....